Semalt: WordPress विषयहरू तपाईंले सिक्नु आवश्यक पर्दछ
अकिस्मेट अबसम्म उत्तम र सबैभन्दा प्रख्यात एन्टि-स्प्याम प्लगइन WordPress WordPress ब्लगहरू र वेबसाइटहरूको लागि हो। तपाईंको व्यापार वेबसाइट वा निजी ब्लगको स्वाभाविकै छैन, अकिस्मेट तपाईंको अनलाइन प्लेटफर्मको एक हिस्सा हुनेछ र स्पाम टिप्पणीहरू मेटाउन मद्दत गर्दछ। अहिले सम्म, त्यहाँ is० लाख भन्दा बढी सक्रिय स्थापनाहरू Akismet को छन्, र संख्या दिन ब दिन बढ्दै छ।
ज्याक मिलर, Semalt का एक अग्रणी विशेषज्ञ, यहाँ सूचित गर्दछ कि यो वर्डप्रेस प्लगइन Automattic द्वारा विकसित गरिएको छ र व्यक्तिगत प्रयोगकर्ताहरूको लागि निःशुल्क हो। जे होस्, यदि तपाइँ यसको उत्कृष्ट सुविधाहरू लिन चाहानुहुन्छ, तपाइँ प्रति महिना $ $ तिर्न तयार हुनुपर्दछ, र त्यो प्रीमियम संस्करण वाणिज्यिक ब्लगहरूको लागि उत्तम हो।
के अकिस्मेट भरपर्दो छ?
अकिस्मेटको बारेमा सब भन्दा राम्रो चीज यो हो कि यो टाइटन हो, जसको मतलब कुनै अन्य एन्टी-स्प्याम प्लगइन यसको सुविधाहरू र गुणहरू नजिक आउँदैनन्। यद्यपि त्यहाँ केहि विकल्प पनि छ। वास्तवमा, त्यहाँ अकिस्मेट विकल्पहरूको एक विशाल सूची छ, तर धेरै जसो WordPress प्रयोगकर्ताहरू र वेबमास्टर्सले यसलाई आफ्नो उपयोगकर्ता मैत्री ईन्टरफेस र अन्य प्रयोगकर्ताहरूको सकारात्मक फीडब्याकको कारण रूचाउँदछन्।
अकिस्मेटले कसरी काम गर्छ?
अटोमेटिकले २०० 2005 मा पहिलो पटक अकिस्मेटको परिचय गरायो र मार्केटिंग गर्‍यो, र यो वर्डप्रेस प्लगइनलाई सबै प्रकारका स्पाम टिप्पणीहरू, बट्सहरू, र मकड़ीहरूलाई प्रभावकारी तरिकामा लड्ने प्रयासमा समयको साथ विकसित र अपडेट गरिएको छ। प्रत्येक चोटि तपाईका पोष्टहरूमा नयाँ टिप्पणीहरू थपिए पछि, अकिस्मेट सक्रिय हुन्छ र ट्र्याकब्याक र पिंगब्याकबाट मुक्त हुन मद्दत गर्दछ। यसबाहेक, यसले स्पाम टिप्पणीहरू समात्दछ र सजिलैसँग हजारौं स्प्याम टिप्पणीहरू दिनदिन ह्यान्डल गर्न सक्दछ। यस वर्डप्रेस प्लगइनले स्वचालित रूपमा एक टिप्पणी स्पाम हो कि होइन भनेर साइट मालिक द्वारा अनुमोदन गर्नु अघि निर्धारण गर्दछ।
हामीले यो बिर्सनु हुँदैन कि अकिस्मेटको औंलाहरू WordPress समुदायको नब्जमा छन् र तपाईंको ज्ञान बिना डाटाको ठूलो मात्रा प्रयोग गर्न सक्ने क्षमता छ।
के Akismet साँच्चै राम्रो काम गर्दछ?
हो, अकिस्मेटले तपाईंलाई विभिन्न स्पाम टिप्पणी-सम्बन्धित समस्याहरू समाधान गर्न मद्दत गर्न सक्छ र सेकेन्डमा बोट्स र स्प्याम फिल्टर गर्न सक्दछ। यसले स्वचालित रूपमा सबै शंकास्पद टिप्पणीहरू रोक्दछ र अनौंठो आईपी ठेगानाहरूको बारेमा सचेत गराउँदछ ताकि तपाईं ती आईपीहरूलाई आफैं रोक्न सक्नुहुन्छ।
के त्यहाँ कुनै विकल्प छ?
जहाँसम्म बिभिन्न एन्टी-स्प्याम प्लगइनहरू अनलाइन छन्, अकिस्मेट अझै पनि विजेता हो र दुबै वेबमास्टरहरू र ब्लगरहरूले उच्च प्राथमिकता दिन्छ। यस वर्डप्रेस प्लगइनका लागि दुई प्रमुख विकल्पहरू Gromap Anti Spambot र Antispam Bee हुन्।
झलकमा, यो प्लगइन राम्रो देखिन्छ र एक शक्तिशाली एन्टी-स्प्याम समाधान। यो दुबै wordpress.com र wordpress.org मा 4..9 रेटिंग छ, तर तथ्य यो हो कि यस प्लगइनको नि: शुल्क संस्करणमा सीमित संख्याका विकल्पहरू र सुविधाहरू छन्। यसको प्रीमियम संस्करण, तथापि, २०१ 2016 मा तीन हजार भन्दा बढी व्यक्तिलाई आकर्षण गर्न सक्दछ। यो प्लगइन दुई मोर्चामा असफल हुन्छ: पिंगब्याक / ट्र्याकब्याक, र मानव स्प्यामरहरू।
२. एन्टिस्पम माहुरी:
एन्टिसप्याम माहुरी अकिस्मेटको अर्को विकल्प हो। यो प्रख्यात प्लगइन लगभग २,000,००,००० पटक स्थापना गरिएको छ र औसत rating.6 को रेटिंग रेटिंग WordPress.com मा र wordpress.org मा छ। स्पष्ट रूपमा भन्नुपर्दा, यो प्लगइन अकिसमेट जत्तिकै प्रभावकारी छैन किनकि यसले मानवीय टिप्पणी र स्प्याम टिप्पणीको बीच भिन्नता गर्न सक्दैन।
के अकिस्मेट राजा हो?
हो, यो सत्य हो कि अकिस्मेट राजा हो जब यो WordPress साइटहरू र ब्लगहरूमा स्प्याम टिप्पणीहरू रोक्नको लागि आउँदछ।